Filtrer les éléments par date : lundi, 09 novembre 2020
lundi, 09 novembre 2020 20:30
Pilo kely : Sambatra ny ankehitriny misy facebook sy someso
Ny anay tamin'izany raha andefa hafatra miafina ianao, dia ny kahie no androvitana kely, dia soratana ny hafatra, dia atsipy ery aloha amin'ilay sipa, indraindray tsy tafita eny ilay hafatra fa misy misopatra eny ampanidinana, na lasa eny an-kafa ka ataony fa izy no andefasanao ilay teny mamy, ka na ianao angarihany, na velotsiky colgate izy.
Misy ny loza fa hitan'ilay mpampianatra ilay hiainga iny ny tanana anipy ilay hafatra, dia mody manafosafo loha aingana, ka dia tsakoina atelina ity fati-taratasy tsy ho tratra.
lundi, 09 novembre 2020 20:20
Côte d'Ivoire: Nohamafisin’ny Conseil Constitutionnel ny fandresen’i Alassane Ouattara
Voafidy fanintelony ho filohan’i Côte d'Ivoire i Alassane Ouattara. 94,27% ny salanisam-bato azony araka ny navoakan’ny Conseil Constitutionnel ao an-toerana.
Tsy nisy fitarainana na fitoriana mikasika ny fifidianana filoham-pirenena voarain’ny Conseil Constitutionnel.
Nidiram-pantiantoka, dobo trosa, tsy misy mpizaha, izany ny zava-misy aty Mananara Avaratra mihatra amin'ireo mpamboly, mpiasa lavanila, mpanangom-botra, mpanondrana any ivelany izao.
Zara raha misy vidiny ny amarotana ny lavanila masaka, 250 000 - 280 000ariary ny kilao lavanila masaka, raha 1 500 000 - 2 000 000ariary izany tamin'ny taon-dasa.
Mitentina 80 000 - 100 000ariary anefa ny nividianana ny lavanila maitso na manta, izay mila 5Kg vao mahazo 1kg masaka. Efa 500 000ar izany ny manta, nefa mbola eo ny kojakoja, ny mpiasa, ny fitaterana.
Mpandraharaha avy Antananarivo, akaikin'ny fitondrana no maro mividy, fa ireo efa mpanao lavanila, tratran'ny olona avokoa ny ankamaroany, nogiazana avokoa ny bankin'izy ireo.
Teren'ny fanjakana tsy maintsy mampody vola vahiny amin'ny vidiny faritan'ny fanjakana ireo mpandraharaha rehetra, nefa tsy arak'izay ny vidin'ny lavanila amarotana azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena.
lundi, 09 novembre 2020 16:29
Kere : Nanolotra vary 100 gony sy voamaina ny Faritra Analamanga
Tonga nanatitra vary sy voamaina teny amin’ny foiben’ny BNGRC Antanimora ny Faritra Analamanga androany, ho anjara biriky amin’ny ady amin’ny kere mianjady amin’ny mponina any atsimon’i Madagasikara.
Vary 100 gony sy voamaina toy ny tsaramaso, voanemba, tsiasisa ary voanjombory 40 gony no natolotra tamin'izany.
lundi, 09 novembre 2020 12:51
Antsirabe : Naholany sady norahonany ilay zazavavy 10 taona
Voasambotry ny Polisin'ny PMPM Antsirabe ny lehilahy anankiray nanolana zazavavikely 10 taona.
Fantatra fa efa naharitra herintaona no nanaovan'ity tovolahy ity ny filan-dratsiny saingy rahonany hovonoina ilay zaza ka tsy sahy niteny.
Ny fizahana nataon'ny mpitsabo dia nanamafy fa nisy tokoa ny tranga fanolanana.
Hatolotra ny fitsarana anio ny raharaha.
lundi, 09 novembre 2020 12:42
Etazonia : Niarahaba ny fahalanian’i Joe Biden ny filoha teo aloha George W. Bush
Raha tsy manaiky lembenana amin’ny fahareseny tamin’ny fifidianana izay ho filoha faha-46 any Etazonia i Donald Trump, efa niarahaba an’i Joe Biden sy Kamala Harris tamin’ny fahalanian’izy ireo tamin’iny fifidianana iny, omaly, ny filoha teo aloha George W. Bush.
Samy olon’ny antoko repoblikana i Donald Trump sy George W. Bush.
lundi, 09 novembre 2020 12:35
BNGRC : Tsy nandray karama efa volana vitsivitsy izao ny mpiasa
Misedra olana ireo mpiasan’ny BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes). Efa efa-bolana mahery izao izy ireo no tsy nisitraka ny valin-kasasarana, vanim-potoana mahabe asa anefa izao fisian’ny kere any atsimo izao.
Fiovan-tsata no tombanana ho mitarika ny fahatarana noho ny pitsopitsony ara-pitantanana tsy maintsy arahina.
Manaitra ny tompon'andraikitra izy ireo mba hanafaingana ny famahana ny olana.
lundi, 09 novembre 2020 12:34
Kitra-Fifanintsanana CAN 2021 : “Misy ny fahabangana goavana eo amin'ny mpilalaon’ny Barea”, hoy i Nicolas Dupuis
Hotontosaina ao amin’ny Kianja Alassane Ouatara ao Abidjan ny alakamisy 12 novambra 2020 ny lalao mandroso hifanandrinan’ny Barea an’i Madagasikara amin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire.
Amn'ny 7ora hariva, ora aty Madagasikara, no hanomboka ny lalao, izay tafiditra amin’ny fifanintsanana hahazoana ny tapakila hahatogavana amin’ny dingana famaranana ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra, na CAN 2021, izay hotanterahina any Cameroun.
Nilaza i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena Malagasy na Barea fa “misy ny fahabangana goavana eo amin'ny mpilalao (Covid-19), mety ihany koa eo amin'ny fahazoan-dalana”.
Na izany aza hoy izy dia mikaro-bahaolana amin'ny fiatrehanay ity lalao ity ny fitondram-panjakana.
Tonga omaly ao Abidjan ny delgasiona tarihiny. Nanomana fandraisana sy fitsenana manokana ny delegasiona malagasy ireo Malagasy manorim-ponenana any Côte d'Ivoire.
Ny Staff sy ny ankabeazan'ireo mpilalao kosa dia anio hariva no tonga ao Abidjan.
Manomboka rahampitso sy ny alarobia ny fanazarantenan’ny Barea ao amin'ny Kianja Alassane Ouatara.
Misy fitenenana malaza hoe "Raha tiana ho potehina ny firenena iray, dia poteho ny fampianarana ao aminy", ary miampy ny hoe "Habadoy ny mponina ao", sy ny hoe "Poteho ny kolo-tsaina sy ny tantarany".
Ny Malagasy dia tia mampiana-janaka, nefa tia mifidy mpitondra tsy nianatra.
Toa mifanipaka ihany raha ny fijery ivelany.
Ny tanora dia maka modely ireo olona lazaina fa tafita eo amin'ny fiaraha-monina, na mpanan-kanto io, na mpanao fanatajahan-tena, na olona mpanefoefo manan-karena ivelany.
Matetika anefa ireny olona misongadina ireny, dia olona noheverina fa resy tantereka teo amin'ny fiaraha-monina, fa noho ny ezaka nataony, na noho ny antony maro dia tafavoaka ka dia malaza. Mety olona tsy nianatra firy matetika.
Maro ihany koa ireo mpanao politika, na mpitondra, eny hatramin'ny député, minisitra, filoham-pirenena no tsy manana mari-pahaizana firy, fa tafita tamin'ny fiaraha-monina dia lasa modely, ary mamin'ny olona.
Ireny anefa dia azo singanina anatin'ny maro, ka tsy azo atao filamatra na fitaratra, satria singa vitsy mihavaka na maningana ihany izy ireny.
lundi, 09 novembre 2020 08:55
09 novembre : Journée internationale des stagiaires
09 novembre : Journée internationale des stagiaires.